Visiting Ankorondrano? Mitady hotely Ottawa? Le Germain Hotel Ottawa mety ho safidinao ...
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Canada Travel News » Visiting Ankorondrano? Mitady hotely Ottawa? Le Germain Hotel Ottawa mety ho safidinao…
Visiting Ankorondrano? Mitady hotely Ottawa? Le Germain Hotel Ottawa mety ho safidinao…
Enga anie 9, 2018
Ireo mpitsidika ny renivohitra kanadiana tsy ho ela dia hanana trano fonenana tsara kalitao kokoa hisafidianana raha hisokatra ny faran'ny 115 volana Le Germain Hotel Ottawa amin'ny faran'ity volana ity.
Le Germain Hotel Ottawa dia ao anatin'ny tilikambo 23 rihana manakaiky ny fahavitan'ny tanàna, antsoina hoe tetikasa fanavaozana ny Fitsarana Arts. Ny trano fandraisam-bahiny dia mitazona ny gorodona 14 ambany, ary ny rihana sivy ambony dia trano fonenana manokana fantatra amin'ny anarana hoe ArtHaus avy amin'ny DevMcGill. Ity tetikasa ity ihany koa no trano vaovao an'ny Ottawa Art Gallery izay be mpitia indrindra, izay nanokatra ny toerany vaovao tamin'ny volana aprily.
Eo amin'ny zoron'ny Daly Avenue sy Waller Street, Le Germain Hotel Ottawa dia miorina tsara amin'ny fitsangatsanganana eny amin'ny manodidina ny tsenan'ny ByWard Market, mamakivaky ny lakandranon'i Rideau manan-tantara, na manatrika fivoriana fivorian'ny orinasa Shaw Center. Parliament Hill, National Gallery of Canada, ary tranombakoka sy tsangambato marobe ao an-tanàna ihany koa dia fanariam-bato fotsiny.
Le Germain Hotel Ottawa dia mirehareha amin'ny efitrano malalaky ny velarana feno zavakanto sy ny endrika maoderina misy lohahevitra "hazavana sy aloka." Ireo varavarankely mihoapampana dia mizaha mankeny amin'ny arabe afovoan-tanàna, manome mazava be eny amin'ny habakabaka, izay voaravaka fotsy sy mainty ary fotsy. Ao anatin'ireo efitrano fandraisam-bahiny, izay misy duvets sy ondana volom-borona, dia misy ny zavakanto nataon'i Julie Couture, mpaka sary Québec. Ny sariny mainty sy fotsy dia mampiseho ny lafiny maro amin'ny tontolon'ny Ottawa ary mandray anjara amin'ny lohahevitra ankapobeny toy ny valin-drihana volondavenona sy jamba mainty misy fika.
Ny Norca Restaurant & Bar ao amin'ny hotely dia manolotra sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva miaraka amin'ny menio iray avy any Nordic Canada. Na izany aza, Chef Dominique Dufour sy ny ekipany dia misafidy ny handrahoana sakafo manokana miaraka amin'ny voankazo, legioma ary proteinina avy any Canada, izay tsy azo antoka afa-tsy ny akora farany ilaina indrindra. Ao amin'ny faritra fisotroana dia afaka miala sasatra amin'ny kôkôla mahazatra, labiera vokarina eo an-toerana ary divay tena tsara ny vahiny.
Io trano fandraisam-bahiny vaovao io no fananana faharoa an'ny vondrona monina ao Montréal, Germain Hospitalité, nanokatra ny varavarany teto an-drenivohitra, taorian'ny fahatongavan'ilay efitrano 148 'tsy misy rivo-doza' Alt Hotel Ottawa tamin'ny taona 2016. Na izany aza, ny fanokafana vaovao dia laharana voalohany amin'ny marika 'Le Germain' avo lenta an'ny orinasa ary lasa fananana fahafito toy izany ao amin'io portfolio any Canada io.
Ny Le Germain Hotel Ottawa dia hanamafy ny tolotra hotely misy ao an-tanàna. Ny mpitsidika UK any Ottawa dia efa afaka misafidy trano hipetrahana isan-karazany manomboka amin'ny trano fivarotana bizina akaiky ka hatrany amin'ny hotely fandraharahana manara-penitra. Na mitady ny fara tampony amin'ny haitraitra na trano fandraisam-bahiny tonga lafatra fianakaviana, misy zavatra mifanaraka amin'ny teti-bolan'ny mpitety faritany rehetra.